Online News 2021-06-22 21:43:08 – lerivre
Online News 2021-06-22 21:43:08
फेरि, राष्ट्रिय सभा १ 1999 1999। को संविधान संशोधनको प्रक्रिया शुरू गरिसक्यो।
मे र जुन बीच, दुबै सिनेट र संविधान समीक्षा सम्बन्धी प्रतिनिधि समितिको सभाले देशको छ भू-राजनीतिक क्षेत्रहरूमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्यो।
समितिको वैधानिक आधारमा उप सिनेटका अध्यक्ष ओभी ओमो-एज्रेको अध्यक्षता हुन्छ। र उपसभापति इद्रिस वेसले आम जनता, कार्यकारी र न्यायिक निकाय, परम्परागत संस्था, राजनीतिक दल, नागरिक समाज संगठन, पेशेवर निकाय र अन्यलाई सुनुवाईमा उपस्थित हुन र पेश गर्न आमन्त्रित गरे।
सुनुवाइको क्रममा नाइजेरियनहरूले क्यानवास गरेका केही मुद्दाहरूमा बढी राज्य, राज्य प्रहरी, शक्तिको बाँडफाँड, संघको पुनर्संरचना, चुनावी सुधार, दण्डहीनताको व्यवस्था रद्द गर्ने, कार्यालयको कार्यकाल, न्यायपालिका र स्थानीय सरकारको आर्थिक स्वायत्तता जस्ता विषय रहेका छन्। र एकदम नयाँ संविधानको मस्यौदा तयार गर्दै।
अन्य स्वतन्त्र उम्मेद्वार, राजनीतिक पदका प्रतिस्पर्धीहरूका लागि उमेर सीमा, न्यायमन्त्रीको पदबाट महान्यायाधिवक्ताको पदको पृथक्करण, भूमि प्रयोग ऐन, महिला समावेशीकरण, जनमत संग्रह, व्युत्पन्न वृद्धि, महाभियोग खंड, आदि।
हालको अभ्यासको सुरुमा सेनेटका अध्यक्ष, अहमद लानले आश्वासन दिए कि सार्वजनिक सुनुवाई नाइजेरियालीहरूले यस प्रक्रियामा उनीहरूको योगदान पुर्‍याउने मंच हो।
„हामी विश्वास गर्दछौं कि नाइजेरियालीहरुलाई आफ्नो धारणा प्रसारण गर्न, आफ्नो ओहदा दिन र उनीहरुलाई जे राम्रो लाग्छ हाम्रो देशलाई अझ राम्रो बनाउने र शासनलाई अझ सक्षम र सफल बनाउनको लागि आवश्यक मञ्च प्रदान गर्न आवश्यक पर्ने सबै कुरा गर्नुपर्दछ,” श्री लानले भने।
„मैले भनेजस्तै हामीले पनि कुनै चीजमा पूर्व धारणा राखेका छैनौं, त्यसैले अब हाम्रा नागरिकहरूले अवसर लिने समय आएको छ।”
यो पहिलो पटक होइन जब संसद्ले संविधानको पुनरावलोकन पुनरावलोकन गरिसकेका छन जुन १ 1999 1999। मा प्रजातान्त्रिक शासनमा फर्किँदा लागू भएको थियो।
व्यवस्थापिका the औं राष्ट्रिय सभादेखि नै संविधान समीक्षाको काम गरिरहेका छन।
यद्यपि विगतमा केहि संशोधनहरू सफल भएका छन्, धेरैले क्रमश: विफलता भोगेका छन् तर नयाँ प्रस्तावमा प्रस्तुत भईरहेका छन्।
प्रतिष्ठित व्यक्ति, समूहहरूले लात हान्छन्
प्रख्यात समूह र व्यक्तिहरूले भने चलिरहेको समीक्षाको विरोध गरेका छन्। केहीले भने यो प्रक्रिया समयको बर्बादी हो भने, अरूले भने यो पैसाको बर्बादी हो भने। नतिजास्वरूप, तिनीहरूले सार्वजनिक सुनुवाईमा भाग लिएनन र संघीय व्यवस्थापिकामा ज्ञापनपत्र पेश गरेनन।
ती मध्ये केही हुन्:
उत्तरी एल्डरहरू फोरम
उत्तरी एल्डरहरू फोरम भने यो समीक्षाको विपक्षमा थियो किनकि यो केवल समयको बर्बादी मात्र होइन संसाधनहरूको अपव्यय मात्र हो।
उक्त समूहका प्रवक्ता हकीम बाबा-अहमदले सिनेटलाई “नाइजेरियालीहरूलाई हाम्रो संविधानको गम्भीर समीक्षामा संलग्न भएको छ भन्ने धारणा दिने बेकारका विचारलाई खारेज गर्न सल्लाह दिए।”
यसले सुझाव दियो कि विचारशील नेताहरु, एल्डरहरु, समूहहरु र पेशागत संगठनहरु र सरकारका प्रतिनिधिहरु „स्वैच्छिकता, साँचो प्रतिनिधित्व, पारस्परिक सम्मान र प्रक्रियाको अखण्डताका सिद्धान्तहरु अन्तर्गत एक देशको रूपमा हाम्रो सह-अस्तित्वको प्रत्येक तत्वको स्वतन्त्र छलफल गर्न को लागी एक हुनु पर्छ। „
यस सम्मेलनको नतीजा, त्यसपश्चात नेशनल एसेम्ब्लीमा बुझाउनु पर्नेछ जसले संविधानमा जनमत संग्रहको व्यवस्था गर्नेछ ताकि नाइजेरियालीहरूले कसरी देशको संरचना र कार्यको चाहना गर्न सक्ने भनेर प्रत्यक्ष निर्णय गर्न सक्दछन्।
अफेनिफेयर, ओहानाइज, PANDEF, मध्य बेल्ट फोरम
पान नाइजर डेल्टा फोरम (PANDEF), Afenifere, Oanaeze Ndigbo र मध्य बेल्ट फोरम समावेश एसएमबीएलएफ, भने राष्ट्रीय राष्ट्रिय सम्मेलन हो यसको संशोधन समय बर्बाद गर्दै कागजात, यो तर्क गर्दै कि देशलाई चाहिन्छ कि यो नयाँ व्यक्तित्व द्वारा लेखिएको संविधान हो।
यस समूहले संघीय सरकारलाई देशव्यापी पारदर्शी र उचित पारदर्शी राष्ट्रिय वार्तालाइ ध्यान दिएर पुनसंरचना र नयाँ संविधान निर्माणको लागि तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेको छ। देशलाई समानतापूर्ण सद्भाव फिर्ता ल्याउन।
ओयो राज्यका गव मकेंडे
गभर्नर Seyi Makinde ओयो राज्यका राज्यले सार्वजनिक सुनुवाईमा किन भाग नलिएको भनेर वर्णन गर्दै अभ्यास पनि समयको बर्बादी हो भनेर भने।
’संवैधानिक समीक्षा के हो? यो वास्तवमै समयको पूर्ण बर्बादी हो। २०१ 2014 मा, तिनीहरूले मानिसहरूलाई अबुजा लगे, तिनीहरू त्यहाँ बसे र तिनीहरूले कागजात निर्माण गरे। हो, राष्ट्रपति जोनाथनले योमा हस्ताक्षर गरेनन किनकि उनी सोच्छन् कि उनी पुनः निर्वाचित हुनेछन र फर्केर आएपछि हस्ताक्षर गर्न चाहान्छन्, „उनले भने।
श्री माकेन्दले यसअघिको पुनर्संरचना र शक्ति विघटन गर्न आह्वान गरेका थिए तर समीक्षा समितिले त्यो पूरा गर्नेमा शंका गरे।
डेल्टाको सरकार ओकोवा
उनको ओयो समकक्ष जस्तो, डेल्टा राज्य को गभर्नर Ifeanyi Okowa पनि समीक्षा विरुद्ध लात। गभर्नरका लागि जो एक पूर्व सिनेट छन्, नाइजेरियालाई नयाँ संविधान चाहिन्छ बरु समीक्षा भन्दा।
ओन्डोको Gov Akeredolu
उनको तर्फबाट, ओन्डोका गभर्नर, रोतिमि अकेरेडोलुले यसका लागि आह्वान गरे १ 63 .63 को संविधानमा फर्कनुहोस्, जसले क्षेत्रहरूलाई तिनीहरूको आफ्नै वेगमा विकास गर्न शक्तिहरू प्रदान गर्‍यो।
„१ 63 6363 को संविधान, जसले देशको गणतन्त्रात्मक स्थितिलाई प्रतिबिम्बित गर्‍यो, नाइजेरिया जस्ता विख्यात देशको लागि सबै भन्दा राम्रो कागजात बनेको छ,” उनले भने।
Ogun को पूर्व-सरकार Segun व्यक्ति
ओगुन राज्यका पूर्व गभर्नर, ओलुसेगुन ओसोबा, पनि वकालत १ 63 .63 को रिपब्लिकन संविधानमा देशको फिर्ती।
“म चाहन्छु कि हामी १ 19 .63 को संविधानमा फर्केर जान सक्दछौं, किनभने त्यसबेला प्रत्येक क्षेत्र आफ्नो गतिमा विकसित भयो। त्यसोभए यो धेरै सुन्दर हुने थियो यदि हामी १ 19 .63 को संविधानमा फर्केका छौं जुन धेरै सम्मेलनहरुमा छलफल भएको थियो। सन् १ 63 .63 को रिपब्लिकन संविधानमा देशको फिर्ती, „उनले भने।
एक पूर्व सिनेटर माओ ओहुबुनवाले भने १ 1999 1999। को संविधान पनि त्रुटिपूर्ण छ र त्यो भनेको नाइजेरियालाई चाहिएको ब्रान्ड नयाँ संविधान हो।
उनले भने कि सन् १ 1999 1999। को संविधानलाई नाइजेरियाली सेनाले घेरिएको थियो।
Afe Babalola, एक कानूनी आइकन, तर्क गरियो यो कि राष्ट्रिय सम्मेलनले संविधानमा संशोधन गर्न सक्ने कुनै पनि उपाय छैन।
उनले भने कि संवैधानिक समीक्षाको सट्टा नेशनल एसेम्ब्लीले राष्ट्रिय सम्मेलनको लागि बोलाउन सक्थ्यो जहाँ राष्ट्रलाई सुम्पने विषयहरू पहिचान गर्न, छलफल गर्न र गोलमेजबाट समाधान गर्न सकिन्थ्यो।
अर्को कानूनी लुमेनरी, माइक ओजेखोमेले भने, १ 1999 1999। को संविधान एक „खराब कागजात” हो जसलाई संशोधन गर्न सकिदैन।
“राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू डराउँछन्; तिनीहरू संशोधन गर्न चाहन्छन्। के तपाई खराब कागजात संशोधन गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईले यसलाई १० लाख संशोधन दिए पनि त्यसले हाम्रो समस्या समाधान गर्न सक्दैन, „उनले भने।
श्री ओझेखोमेले भने कि नाइजेरियाले हाल „दम घुटमिलिएको व्यवस्था” अन्तर्गत काम गरिरहेको छ किनभने संविधानका कारण उनले „नरकको खाडलबाट झूटा कागजात” बनाएको हो।
सेवानिवृत्त प्रमुख र पूर्व प्रमुख सुरक्षा अधिकृत (सीएसओ) हमला मुस्तफाका लागि सन् १ 1999 1999। को संविधान संशोधन गर्ने वर्तमान प्रयासले काम नगर्न सक्छ, किनकि यो हडबडमा भइरहेको छ।
“संवैधानिक संशोधनहरू सबैलाई साथसाथ लैजानुभएको छ, तर हतारमा केही संभ्रान्त वर्गलाई संवैधानिक संशोधन मैले देखेको छु।
’संवैधानिक संशोधनमा समय दिइनु पर्दछ र बहुसंख्यक वर्गलाई छोड्ने केही संभ्रान्त वर्गको राय लिनु हुँदैन।
“अधिकांश नाइजेरियालीहरू विशेष गरी ग्रामीण समुदायमा दबिएका मानिसहरूलाई के भइरहेको छ भन्ने बारे सचेत छैन, उनीहरूसँग सार्वजनिक सुनुवाइका लागि सहरी केन्द्रहरूमा जान पैसा पनि छैन।
„दिनको अन्त्यमा तपाईले संविधान संशोधन गर्ने प्रयासमा केही अभिजात वर्गको विचार सुन्नुभयो,” उनले भने।
सांसदहरूले विरोधको खण्डन गरे
प्रतिनिधि सभाका प्रवक्ता बेन्जामिन कालूले तर्क गरे कि सन् १ 63 63 Constitution को संविधानमा फर्कने केही बुँदाहरूमा बोलावट थियो अनावश्यक।
यद्यपि उनले जारी संविधान समीक्षा अभ्यासको राम्रो नतीजा प्राप्त गर्न १ 19 .63 र १ 1999 1999। को संविधानलाई मुख्य बुँदाहरू अपनाउने वकालत गरे।
← Online News 2021-06-22 21:29:53
Online News 2021-06-22 21:49:17 →